Kurara mwana muduku kurara-manotsi uye kunyorera kuti unyore
Kurara zviduku zvevana - zvinyorwa uye kunyora
Kurara zvishomanana zvekubata zvinyorwa
Mazano uye kunyora kurara mwana muduku akarara
Kurara, mwana, kurara!
Baba vanochengetedza makwai,
amai vanomunyunyuta Bäumelain,
ipapo inowira pasi ichirota.
Mumatenga enda makwai ':
Nyeredzi duku idzi makwayana,
mwedzi, ndiye mufudzi.
Saka ndinokupa makwai
iyi inofanira kunge iri shamwari yako.
uye usagumburwa semakwai;
Kana zvisina kudaro, imbwa yemufudzi ichauya
uye inoruma mwana wangu akaipa.
Noten von Kinderlied Schlaf Kindlein gara Open as graphic file
Little hare - manotsi uye zvinyorwa
Bunny mumugodhi - mupepeti wemimhanzi uye kunyora